Warsugan: Wadahadaladii Imaaraadka Iyo Maamulka Muqdisho ee Hishiisyada DP World iyo Xaldhigu maxay ku dhamaadeen | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Warsugan: Wadahadaladii Imaaraadka Iyo Maamulka Muqdisho ee Hishiisyada DP World iyo Xaldhigu maxay ku dhamaadeen
Farmaajihii Berbera laga kari la’aa, ee Somaliland ka marooradilaacsanaa Imaaraadku sheekadii waa ay u soo gaabiyeen! Dawladda Imaaraadku laba su’aallood ayey isku dul rakibbatay, isna caadifad, calool-xumo iyo xumaan is barkan ayuu la hillaabnaa waxba se uma diyaarsaneyn.
Dawladda Imaaraadku waxa ay warsatay Farmaajo in uu diidan yahay Somaliland oo la maalgaliyo marka hore, waa dhanka DP World eh?
Maya ayuu ku jawaabay, waxa se uu sheegay isaga oo raba in uu garnaqsado in sharciga caalamiga ah ee dhulka iyo xuduudaha Soomaaliya iyada oo la ixtiraamayo ay mudneyd in dawladda Imaaraadku soo marto Muqdisho.
Dawladda Imaaraadku jawaabta waydiimihiisa hore ayey u sii diyaarsatay. La iska ma ba waalin, sharcigana lagu ma margan, waxa uun laga codsaday in uu Berbera gayn karo oo hantida intaa le’eg ee maalgashiga ah dammaanad qaadi karo.
Haddii uu sidaa sameeyo in ay diyaar Imaaraadku u yihiin in ay la saxeexdaan heshiiska Berbera. Isaga oo ammuurta amniga ka duulaya ayuu codsaday in Muqdisho laga dhigo. Waxa se mar labaad dawladda Imaaraadku warsatay in haddii ay sidaa yeelaan ay Somaliland heshiiska ka bixi doonto. Iyaga oo waydiin kale ku celiyey waxa uu yeeli karo haddii ay Somaliland qaadacdo gabi ahaan heshiiska?
Godkaa labaad ee dacwadda Farmaajo Imaaraadku si wacan ayey isaga awdeen. Arrintaasi waa ay ku adkaatay caadifi Farmaajo iyo Garaadkii warriyaha ahaa! Runtu waxa ay ku soo gudhay in aaney Somaliland iman karin, wax ay diidana ku sandullayn karin. Imaaraadka oo garnaqsigiisii diblomaasiga ahaa sii wata ayaa mar labaad warsaday in ay diidan yihiin maalgashiga Berbera?
Jawaabtoodu maya ayey noqotay, ileen nin dal uu sheeganayo odhan kara maalgashi ayaan u diidanahay oo xayiraad ayaan saarrayaa ma jiro eh. Imaaraadku waxa ay dacwaddoodu tahay in haddii uu rabo in uu wax ka saxeexo heshiiska Berbera in uu uga sii hormaro Berbera iyana aaney waxba ka qabin in ay mar labaad kala xaajoodaan heshiiska, ayey war ku soo gunaanadeen.
Farmaajo waxoogaa ayuu afku juuqda gabay, dabadeedna Yuusuf Garaad ayaa isaga oo siriirsan hadalka qaatay; saldhigga ciidan ee Berbera hawshiisa oo ah mid amni khusaysa oo gobolka oo dhan ah iyana waan u soconnaa?
Imaaraadku waxa ay ku war-geliyeen in saldhiggu yahay mid ay hantidooda bilaa damaanadda ah keliya ku ilaashanayaan. Dib ayey u warsadeen in uu dammaanad qaadi karo iyo in kale. Jawaabtuna waa maya oo dawarsi wax uu dammaanad qaadi karo ma leh.
Ugu danbeyn, Farmaajo iyo Garaad Imaaraadka waxa ay ka codsadeen in aaney Somaliland aqoonsan, isna waxa uu u sheegay in hawshaasi aaney meesha oolin ee ay tahay mid Soomaalida, dalalka Afrika iyo adduunka intiisa kale u taal.
Wixii intaa ka danbeeyey dawarsigii ayaa ay bilaabeen Yuusuf Garaad iyo Farmaajo, iyaga oo abaaraha gabbood ka dhiganaya laga na aqbal. Waxa ay isku arkaan mar haddii shillimaad dawaro ah loo tuuray in ay guuleysteen.
Sheekadii Berbera iyo Farmaajo ii geeya halkaa ayey ku soo af-jarantay. Dadka Reer Somaliland midnimo ayaan ugu baaqayaa iyo wadajir. Cid iyo cadow kale toona waxba ka qaadi maayo haddii isku duubnida guduhu ay toolmoon tahay. Somaliland ha noolaato.
by: Mohamed Hagi Mohamoud